I-SocialBee: Iqonga lamaShishini amaNcinci leMedia yeNtlalo eneenkonzo zeConcierge | Martech Zone
I-SocialBee: Iqonga lamaShishini amaNcinci leMedia yeNtlalo eneenkonzo zeConcierge
Ukutyhubela iminyaka, ndiphumeze ndaza ndadibanisa uninzi lwamaqonga eendaba ezentlalo kubathengi. Ndisenobudlelwane obuhle nabaninzi kwaye uqhubeka undibona ndikhuthaza amaqonga amatsha kunye asele ekhona. Oko kunokubhida abafundi… bezibuza ukuba kutheni ndingacebisi nje kwaye ndityhale iqonga elinye lomntu wonke. Andiyenzi kuba zonke iimfuno zenkampani nganye zahlukile kwenye.
Kukho inkitha yamaqonga eendaba ezentlalo anokunceda amashishini… kodwa iinjongo zakho, qhinga, abaphulaphuli, ukhuphiswano, iinkqubo, italente, uhlahlo lwabiwo-mali, ixesha, amanye amaqonga akwistakhi sakho… zonke zidlala indima enkulu kubathengisi onokuthi ufumane imbuyekezo kutyalo-mali kubo. Yiyo loo nto injongo ikumgca wethegi we Martech Zone luphando, ukufunda, kunye nokufumanisa. Andikwazi ukubeka izisombululo zeodolo phaya ngaphandle ndide ndiqonde ishishini lakho. Ekunene isisombululo kuba ishishini lakho linokuba lichasene noko ndingacebisa kwelinye.
SocialBee: YeeSolopreneurs, amaShishini amaNcinci, kunye neeArhente eziBakhonzayo
IntlaloBee liqonga lolawulo lwemidiya yoluntu ejolise ekudalweni komxholo kunye nokwabelana ngokusebenzisa amajelo asekuhlaleni. Inkampani yahlukile kuba iqonga liza noqeqesho kunye neenkonzo ezikhethiweyo ze-concierge ukunceda abantu abazimeleyo, amashishini amancinci, kunye neearhente ezibancedayo. Awufumani nje iqonga, kodwa unokongeza iingcali ezizinikele ngokupheleleyo ukukunceda ngokudala umxholo, iintengiso, ukukhula koluntu, kunye nokunye.
SocialBee Platform Overview
Ukwabelana ngomxholo kugxininise ngaphakathi IntlaloBee yohlukile ngokwenene, iimpawu ziquka:
IiCategories Content Media Media -Amacandelo akunceda ukuba uququzelele izithuba ukuze ufumane umxube ongcono womxholo kwaye unikeze ulawulo olungcono lokucwangcisa, ukulungiswa kwenethiwekhi nganye, ukuvelisa ukuhluka, ukuhlela ubuninzi, kunye nokuphinda ulandele umgca. Unokunqumama okanye usebenzise iindidi ezithile.
Ukupapashwa kweendaba zosasazo -Yila kwaye ujonge izithuba zakho zemidiya yoluntu ngeehashtag ezigciniweyo ngeprofayile okanye iqonga. Iqonga likwaxhasa i-emojis ukuba ivelele. Ungangenisa ngaphandle izithuba nge CSV, uShishino, Quuu, okanye Pocket.
Ukudityaniswa kweMithombo yeendaba -papasha kwiiprofayile zakho zikaFacebook, amaphepha kunye namaqela. Papasha kuTwitter. Papasha kwiiprofayili zakho ze-LinkedIn kunye namaphepha enkampani yakho. Thumela imifanekiso, iicarousels, okanye iividiyo kwi-Instagram. Thumela kuGoogle iShishini lam.
Ukucwangciswa kweMidiya yoLuntu -Jonga ikhalenda yakho, iposti ngamaxesha athile, ukuphelelwa kwezithuba eziceliweyo ngomhla othile okanye emva kwenani lezabelo. Ishedyuli yomntu ngamnye esekelwe kwiprofayili nganye.
Izaziso email -ukwaziswa xa izithuba zingaphumeleli, xa ukungenisa elizweni kugqityiwe, okanye xa umgca wodidi lwakho ungenanto.
I-Analytics - dibanisa ukufinyezwa kwe-URL (Rebrandly, Bitly, RocketLink, JotURL, Replug, PixelMe, BL.INK) kunye necandelo-based Useto lwe-UTM ukulandelela ukusebenza komxholo wakho.
Incwadi yeDemo yeSocialBee
Nanku umboniso wevidiyo weqonga:
Iinkonzo zeSocialBee Concierge
Nokuba ulawula eyakho isicwangciso seendaba zoluntu okanye izicwangciso zabathengi bakho, IntlaloBee inikeza inani lenyanga leephakheji zenkonzo yemidiya yoluntu, kuquka:
Ukudalwa koMxholo woLuntu -Imidiya yoluntu yinxalenye ebalulekileyo yokuthengisa kwakho, ngakumbi ukuba ujonge ukufumana ingqalelo kunye nokwazisa. Isinyathelo sokuqala sokwakha ubukho obuqinileyo kwimidiya yoluntu ukwabelana ngomgangatho ophezulu kunye nomxholo obonakalayo obonakalayo rhoqo.
UkuThengiswa kweMpahla -Ukudala umxholo kukwenza ukuba wakhe ubudlelwane kwaye udale ukunyaniseka kunye nokuthembela kubathengi bakho bangoku kunye nethemba. Ngaphezu koko, umxholo owenziwe kakuhle uvelisa i-traffic kwiwebhusayithi yakho kwaye uba yinto ephambili kwinkqubo yakho yokuvelisa.
Ukukhula Okubandakanyekayo -Ukukhuthaza ubudlelwane be-1-on-1 ukwakha uluntu olujikeleze ishishini lakho kuyahlawula! Uluntu alungomthombo omkhulu wempendulo kuphela kodwa ukuba lwakhiwe ngokufanelekileyo, unokujika abaphulaphuli bakho babe ngabathengi abahlawulayo kwaye kamva kubameli abathembekileyo.
Ukufunyanwa kunye noKwandiswa -Iinzame zentengiso kwimithombo yeendaba zentlalo ayipheleli nje ekukhuliseni ukufikelela kwakho kwaye ikwenze ukuba wabelane ngomyalezo wakho kuwo onke amajelo amaninzi, kodwa ikwalingana naluphi na uhlahlo lwabiwo-mali kwaye kulula ukuyilinganisa. Ngaphezu koko, ufumana ukufikelela kwiikhrayitheriya zokujolisa.
Kwaye, ukuba ufuna nje uncedo ekuqaliseni, i-SocialBee ibonelela ngephakeji yomrhumo othe tyaba ukufudukela kuwo wonke umxholo wakho. IntlaloBee okanye ujonge ukuqala ngokutsha, singakunceda ngoseto lokuqala. Ukusuka ekudluliseleni wonke umxholo wakho kunye noseto lwangaphambili kwi-SocialBee, ukudibanisa ishedyuli yakho, unokuthembela kuthi!
Funda ngakumbi ngeeNkonzo zeSocialBee
Ukubhengezwa: Ndililungu le IntlaloBee kwaye ndisebenzisa amakhonkco obulungu kweli nqaku.
tags: kancinciI-BL.INKUkuThengiswa kweMpahlaiinkonzo zokuthengisa umxholocsv kwimidiya yoluntuFacebookIqela le-FacebookUpapasho lweqela likaFacebookikhasi le facebookUkupapashwa kwekhasi likaFacebookIprofayile kaFacebookUGoogle ishishini lamgoogle ishishini lam lokupapashainstagramupapasho lwe-instagramIJotURLiphepha lenkampani elikhonkcoupapasho lwephepha lenkampani elikhonkcoI-PixelMePocketquuuNgebhongo kwakhonaReplug kwakhonaRocketLinkuShishinoShishiniarhente yamashishini amancinciyentengiso yeendabaukudalwa komxholo wemidiya yoluntuukukhula kwemidiya yoluntuukudityaniswa kweendaba zosasazoukupapashwa kwimidiya yoluntuUkucwangciswa kweendaba ezentlaloiinkonzo zemidiya yoluntuisicwangciso seendaba zoluntuuqeqesho kwimidiya yoluntusocialbeeTwittermfutshane we-url
I-WP Yonke iNgenisa ngaphandle: Indlela yokuNgenisa ngoBuninzi Uluhlu lweTaxonomy kwi-WordPress ukusuka kwi-CSV